Ny baikon'ny feo Google Assistant tsara indrindra rehefa mandeha eny amoron-dranomasina | Androidsis
Google Assistant dia lasa mpiara-miasa tsara ary afaka mandeha amoron-dranomasina izahay miaraka amin'ny fanampianao noho ireo baiko am-peo ireo izay mamela anay hifandray amin'ny finday hafa. Amin'izao andro amoron-dranomasina sy fahavaratra izao dia misy safidin-tsofina feo izay ahafahanao mamonjy ny tenanao tsy hikasika ny efijery sy hampiasa ny feonao rehefa mitondra ny fiaranao mankany amin'ny toerana tondranao.
Ny mpanampy Google dia tsy te-hahita iray, ary manana baiko am-peo maro izay hampianarinay anao hanondro ny tobin-tsolika akaiky indrindra na hampatsiahy anao hividy takariva amin'ny masoandro eny amin'ny fivarotana lehibe alohan'ny handehanana eny amoron-dranomasina. Mandeha amin'ny baikon'ny feo ilaina indrindra amin'ny Google Assistant izahay mampianatra anao hamoha ny findainao amin'ny feonao aza.
1 Vohay amin'ny "Ok, Google" ny findainao
2 Fanontaniana lehibe hapetraka amin'ny Google Assistant
3 Rehefa mitondra fiara mankany amin'ny toerana amoron-dranomasina izahay
4 Efa eo amoron-dranomasina isika
Vohay amin'ny "Ok, Google" ny findainao
Ny finday dia iray amin'ireo zavatra tsy hohadinoinay velively rehefa mandeha eny amoron-dranomasina isika haka sary na mampakatra tantara Instagram, saingy tena ilaina ny manamboatra azy mba miaraka amin'ny baiko «OK, Google» dia voasakana ny finday. Amin'izany no hanavotanao tena fa tsy hikasihanao akory.
Manokatra ny fampiharana Google izahay.
Manery izahay mihoatra ny kisary hamburger hita eo ambany.
Ao amin'ny «Settings».
Handeha "Voice" isika.
Tsindrio eo "Voice Match".
Izahay dia mampihetsika ny safidy «Sakano miaraka amin'ny Voice Match.
Fanontaniana lehibe hapetraka amin'ny Google Assistant
Alohan'ny handraisana ny fiara dia afaka mampiasa andiana baiko maromaro izahay hampahafantarana antsika ny toetran'ny toetr'andro ny toerana, ny halavirana mankany amin'ny toerana itodiana, na koa izany dia mampatsiahy antsika hividy sunscreen mba hahafahantsika milentika masoandro nefa tsy manahy.
"Manao ahoana ny andro anio?".
"Ampahatsiahivo aho hividy sunscreen."
«Ahoana no hataoko any amoron-dranomasina Valdevaqueros any Tarifa?».
"Handrivotra ve any Tarifa?"
«Rivotra inona no hisy any Tarifa afaka 2 andro?
"Ohatrinona ny 10 pounds amin'ny euro?"
"Lazao amiko ny halaviran'ny Madrid mankany Malaga."
Rehefa mitondra fiara mankany amin'ny toerana amoron-dranomasina izahay
Efa lasa izahay ary tianay ianao Google Assistant dia mametraka fanairana ho antsika amin'ny 6 ora tolakandro raha te hiverina, na hahita tobin-tsolika akaiky anay, satria efa hiditra ao amin'ny tahiry isika. Google Assistant ao anaty fiara dia mety raha mifantoka amin'ny làlana tsy misy fanelingelenana.
"Mametraha fanairana amin'ny 6 tolakandro."
"Rahoviana no milentika ny masoandro?"
Mitadiava tobin-tsolika akaiky.
Mandehana any amin'ny supermarket akaiky indrindra.
"Misy bara amoron-dranomasina ve eto?"
Ny fiara dia mety amin'ny fihainoana ny mozika ankafizintsika, noho izany izahay andiana baiko maromaro handefasana fampiharana, atsangano ny feony na asio mozika tonga lafatra amin'ny fivezivezena ho an'ny Google Mpanampy anay.
Mitendry mozika fitsangatsanganana.
«Te-hihaino ny -artist-«.
"Antsoy i Neny fa tsy tanana."
"Atsangano ny haavon'ny feo".
Efa eo amoron-dranomasina isika
Eo amoron-dranomasina dia feno fasika ny tanantsika na lena fotsiny rehefa avy nandro. frna tsy dia manam-potoana hanamainana ny tanantsika isika rehefa milentika indray hamelombelona ny tenantsika isika, miaraka amin'ny Google Assistant dia ho afaka hifandray amin'ny namantsika mora foana isika; na dia afaka manao antso an-tsary isika izao.
«Manorata amin'i Marta« Eo amin'ny bara amoron-dranomasina aho ».
"Mandefasa hafatra WhatsApp amin'i Fran miaraka amin'ny lahatsoratra Ho avy tsy ho ela aho."
"Manaova antso an-tsary miaraka amin'i Raquel."
Toy izany koa no mitranga amin'ny sasany amin'ireo asa fototra indrindra amin'ny findaintsika toa ny ampiasao selfie ny fakantsary na ataovy mangina ny telefaona, mba tsy hisy hanelingelina anay mandritra ny hatory kely eto ambanin'ny elo na ny filentehan'ny masoandro.
Makà selfie ho ahy.
"Ataovy mangina ny finday."
«Milalaova sarimihetsika miaraka amin'i Emojis».
Ahoana raha te hanana gilasy isika? Sa tsotra, te hahafantatra ny fomba hiarahabana, amin'ny fiteny toa ny Alemanina, hihaona amin'olona amin'izao fotoana izao tena mety aminy ve isika?
"Inona ny trano gilasy akaiky anao indrindra?"
"Inona no mari-pana?".
"Ahoana no ilazanao hoe 'Salama' amin'ny teny alemà?"
Ireo dia ny sasany amin'ireo baiko mpanampy Google tena ilaina indrindra ka amin'izao andro amoron-dranomasina sy fialantsasatra izao dia afaka manolotra serivisy tsara kokoa ho antsika ny finday.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny baikon'ny feo ilaina indrindra an'ny Google Assistant mandritra ny iray andro eny amoron-dranomasina
Xiaomi Redmi Note 5: tonga ny variana 6GB + 128GB vaovao